» “देउवाले प्रचण्ड,लाई प्रधानमन्त्री, तपाई की मँ भन्दै झपारे पछि निलोकालो, भएर फर्किए” “देउवाले प्रचण्ड,लाई प्रधानमन्त्री, तपाई की मँ भन्दै झपारे पछि निलोकालो, भएर फर्किए” – हाम्रो खबर
“काठमाडौं “परमादेश बाट बनेको सरकारले २ महिना सम्म पनि सरकार विस्तार गर्न सकेको छैन । सरकार विस्तार गर्न नसकेर लाचार भइरहेको बेलामा सत्तासाझेदार प्रमुख दलहरु विचको सम्बन्धमा पनि चिसोपन देखिन थालेको छ ।”
“मन्त्रीपरिषद विस्तारकै विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विच नोकझोक नै चलेको छ । मन्त्रीपरिषद विस्तार नगरी सरकारले काम गर्न सकेन भनेर प्रचण्डले भने पछि देउवाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री तपाई की मँ? भनेर हप्काएको बताइन्छ ।”
“मन्त्री परिषद विस्तार अहिलेनै किन गर्नु पर्यो? सरकारले राम्रो सँग काम गरेकै छ मैले सरकार राम्रो सँग चलाएकै छु तपाईले चिन्ता गर्न पर्दैन सबै कुरा मिले पछि सरकार विस्तार हुन्छ तपाई चिन्ता नलिनुस् भन्दै देउवाले प्रचण्डलाई भनेको स्रोतको दावी छ ।”
“कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ०७८ भदौ २९ गते दुई महिना पूरा भएको छ । सरकार गठन भएकै दिन उनले कांग्रेस र माओवादीबाट २र२ र त्यसपछि एक जना राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तर त्यसयता उनले अहिलेसम्म आफ्नो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।”
“१७ मन्त्रालय दुई महिनादेखि मन्त्रीविहीन भएपछि काम–कारबाही प्रभावित हुने नै भए । जानकारहरू देउवा सरकारमा अहिले देखिएको अकर्मण्यताको दूरगामी प्रभाव रहने बताउँछन् । केपी शर्मा ओलीको विस्थापन गरेर बनेको देउवा सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन । स्वयं सत्ताधारी दललाई पनि सरकारको शिथिलता टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।”
“सरकारको रवैयालाई लिएर असन्तुष्टि र आलोचना बढे पनि देउवाले भने त्यसको महसुस नगरेको बताइन्छ । स्रोतका अनुसार, देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग मन्त्रिपरिषद् विस्तार नभए पनि आफूले सरकार राम्रैसँग चलाएको दावी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको बिलम्वले सरकारको छवि र कामकारबाहीमा परेको प्रभावबारे प्रचण्डले देउवासमक्षा भेटघाटका क्रममा चासो राख्ने गर्नु भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘जवाफमा देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार नभए पनि सरकार राम्रोसँग चलेको जिकिर दावी गर्ने गर्नुभएको छ ।”
“सरकारले नेकपा एमाले विभाजनका लागि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । संसदीय दल र केन्द्रीय समिति मध्ये कुनैमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने अध्यादेशले एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षले अलग दल दर्ता गरिसकेका छन् ।”
“नयाँ बनेका दलमध्ये माधवकुमार नेपाल समूह सरकारमा सहभागी हुन आतुर छ । महन्थ ठाकुर पक्ष पनि अवसर दिए देउवा सरकारमा मन्त्री पठाउने मुडमा छ एमाले विभाजनका लागि ल्याइएको यही अध्यादेश अहिले सत्ताधारी दलका लागि घाँडो भएको छ । अध्यादेशको प्रावधानमा टेकेर सत्ताधारी दलभित्रै विभाजन आउने जोखिम बढेपछि हिजो विपक्षीका लागि प्रहार गर्न प्रयोग गरिएको अध्यादेशको हतियार आफ्नै लागि घाँडो भएको हो”
“अध्यादेशको अभिष्ट पूरा भइसकेकाले सरकार अध्यादेश निष्क्रिय पार्न चाहन्छ । ०७८ भदौ २३ गते प्रतिनिधिसभामा पेस अध्यादेश सरकारले निवेदन दिएर फिर्ता लिन सक्छ । तर यही अध्यादेशको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेकाले फिर्ता कानूनी जटिलता उत्पन्न भएको छ । किनभने, यससम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा यसलाई प्रतिनिधिसभाबाट फिर्ता लिन मिल्दैन ।”
“अध्यादेशबारेको मुद्दाको पेसी २०७८ भदौ २९ गते मंगलबारका लागि तोकिए पनि यसबारे सुनुवाइ हुन सकेन । अध्यादेश मामला सल्टिन अझै केही समय लाग्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार थप अन्योलमा परेको छ ।”